Nhau - Maitiro ekugadzira Sintered Neodymium Magnets?
Sintered NdFeB maginetimagineti ealloy akagadzirwa kubvaNd, Fe, B uye zvimwe zvinhu zvesimbi.Iine ine magnetism akasimba, simba rakanaka rekumanikidza. Inoshandiswa zvakanyanya mu mini-motors, mhepo jenareta, metres, maseru, masipika, yemagetsi kusimudzira system, yemagetsi kufambisa muchina uye zvimwe zvinoshandiswa mumaindasitiri. Zviri nyore kwazvo kuita ngura munzvimbo dzakanyorovera, saka zvakafanira kuita kurapwa kwepamusoro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Tinogona kupa kupfeka, kwakadai seZinc, Nickel, Nickel-mhangura-nickel, Sirivheri, goridhe-yakanamirwa pamifananidzo, Epoxy bemhapemha, etc Grade: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, N28EH-N35EH
Iyo Kufambisa kweSintered Neodymium Magnet Kugadzira
Iyo yemagineti mbishi zvigadzirwa uye zvimwe simbi zvinoiswa pachena kusvika pakati pehuwandu uye ikanyungudika muyakagadziriswa induction.
Mushure mekupedza akasiyana matanho maitiro, iyo ingots inokwenenzverwa kuita zvidimbu zvine akati wandei ma microns muhukuru. Kuitira kudzivirira oxidation kubva kuitika, zvidiki zvidiki zvinodzivirirwa ne nitrogen.
Iwo magnetic particles anoiswa mujig uye magineti inoiswa apo iwo magineti anodzvanywa kuita maumbirwo kunyanya. Mushure mekutanga kuumbwa, mafuta isostatic kudzvanya ichaenda kumberi kuumba maumbirwo.
Iyo magineti inochengeterwa inoiswa mune ingots iyo yakatsikirirwa uye ichave kupisa kurapwa mukati me sintering furnace. Kuwanda kweiyo ingots yapfuura kunongorova makumi mashanu kubva muzana yechokwadi density kune sintering. Asi mushure mekutswanya, iyo chaiyo density iri 100%. Kubudikidza nemaitiro aya, kuyerwa kweengots kunoda kudzikira 70% -80% uye huwandu hwayo hwadzikiswa ne50%.
Basic magineti ehupfumi akaiswa mushure mekukanganisa uye kukwegura matanho apera. Izvo zviyero zvakakura zvinosanganisira zvakasara flux density, yekumanikidza, uye yakanyanya magetsi chigadzirwa zvakanyorwa.
Iwo chete magineti akapasa kuongorora ndiwo anotumirwa kune anoteera maitiro, sekugadzira uye kuungana.
Nekuda kwekudzikira kubva munzira yekutsvaira, zviyero zvinodiwa zvinoitwa nekukuya magineti ane abrasives. Madhaimani emabrasives anoshandiswa kuita izvi nekuti magineti acho akaomarara.
Kunyatsoenderana nharaunda mavanenge vachizoshandiswa, iwo magineti anoiswa akasiyana siyana kurapwa kwepamusoro. Nd-Fe-B magineti anowanzo kubatwa nengura nechitarisiko chinobatwa seNiCuNi magineti, Zn, Epoxy, Sn, Nhema nhema.
Mushure mekurongedza, zviyero zvinoenderana uye nemaziso ekuongorora zvichaitwa kusimbisa magineti edu chigadzirwa chitarisiko. Kunze kwezvo, kuve nechokwadi chepamusoro chaiyo, isu tinodawo kuyedza saizi kudzora shiviriro.
Kana iko kuonekera uye hukuru kushivirira kwemagineti inokodzera, inguva yekuita magnetization yemagineti kutungamira.
Inotevera yekuongorora uye magnetize, magineti akagadzirira kurongedza nepepa bhokisi, kunyangwe yemapuranga nhovo sekuenderana nezvinodiwa nevatengi. Magnetic Flux inogona kusarudzika nesimbi yemhepo kana kuratidza kununura izwi.